Kollywood Hangama | » के होला राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको फिल्ममा सहकार्य ? के होला राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको फिल्ममा सहकार्य ? – Kollywood Hangama
Published On: Wednesday November 18, 2020
कलिउड हंगामा । अभिनेता राजेश हमाल र अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेपाली फिल्मका सर्वाधिक रुचाइएका जोडी हुन् । एक समय यी दुईलाई लिएपछि फिल्म हिट हुन्छ भन्ने विश्वास निर्मातामा थियो । उनीहरु अभिनीत फिल्म प्रायः सफल पनि छन् । करिअरको उत्कर्षमा रहँदा तीन दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा एकसाथ काम गरेका उनीहरु पछिल्लो पटक फिल्म ‘किन किन’ मा देखिएका थिए ।
फिल्ममा सहकार्य हुन नसके पनि राजेश र करिश्माले म्यूजिक भिडियोमा भने काम गर्दै आएका छन् । ‘तिमी मेरो प्राण, उजाड मेरो, चट्ट बसम देउरालीमा’ गीतको भिडियोमा उनीहरुको जोडी बाँधिएको छ । यी दुईले अभिनय गरेको नयाँ गीत ‘यादका लहरहरु’ केही दिन अगाडि मात्र यूट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । यी गीतमा दर्शकहरुले यो जोडीलाई निकै मन पराएका छन् ।
अहिले राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको म्यूजिक भिडियोमा राम्रो माग छ । उनीहरुले पनि भिडियोमा एकअर्कासँग काम गर्न आनाकानी गरेका छैनन् । तर, फिल्ममा चाहिँ किन उनीहरुबीच सहकार्य हुन सकेको छैन ? धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । एक समय हिटको ग्यारेन्टी मानिने यो जोडी पुनः पर्दामा फर्किए दर्शकसँगै नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई पनि खुसीको कुरा हुनेछ ।
यी हुन् कर छल्ने ठुलाघराना
महानायक राजेश हमाल र करिश्मा फेरी एकसाथ आउदै